BURCO: Wiil Da’yar Oo Curiyey Nidaam Kombiyuutaradda Ka Difaaca Fayriska – somalilandtoday.com
BURCO: Wiil Da’yar Oo Curiyey Nidaam Kombiyuutaradda Ka Difaaca Fayriska
(SLT-Hargeysa)-Cabdiraxiim Maxamed Xuseen oo la sheegay in uu ikhtiraacay nidaamka koombiyuutarada ka difaaca fayriska (Anti Virus), ayaa la filayaa in uu ku soo bandhigo maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.
Munaasibada carwada bandhiga buugaagta Togdheer oo maanta ka furmaysa magaalada Burco, isla markaana ay ka soo qeybgelayaan hal abuurro ka mid ah da’yarta reer Somaliland, ayaa la sheegay in lagu soo bandhigi doono muddada saddex maalmood ah ee bandhigaasi ka socon doono hoteelka Plaza.
Halku-dhiga sannadkan oo loo qaatay “Hiilka Hibooyinka” ayaa da’yarta ka qayb gelaysa madasha carwadaasi ku soo bandhigi doonaan hal-abuuradooda, waxaana da’yartaasi ka mid ah Cabdiraxiim Maxamed Xuseen, waxaanu yidhi mar uu ka hadlayay hal-abuurkiisa, “Sannadihii u dambeeyey farsamada casriga ah (Technology), waxay samaynaysay horumar wanaagsan. Anniguna waxaan isku deyey inaan farsamadaa ka faa’iidaysto oo aan doorkayga ku yeesho.”
Cabdiraxmaan oo ah wiil da’yar ayaa sheegay inuu laba sannadood horteed bilaabay ikhtiraac uu ku sameeyey nidaam koombiyuuterada ka difaaca halista fayraska, waxaanu yidhi, “Sannadkii 2016-kii ayey ahayd markii ugu horreysay ee aan soo bandhigo nidaamka difaaca Koombiyuuterka (Anti Virus), oo aan dedaal badan geliyey currintiisa, si aan u samayneeyo ka dibedaha laga keeno ee dalkeena lagu isticmaalo.
Illaahay mahadii waxaan ku guulaystay inuu noqdo mid laysku hallayn karo, oo shaqeynaya, waxaanan ku rajo-weynahay in aan dalka wada gaadhsiiyo.”
Sidoo kale qabanqaabiyeyaasha carwada buugaag Togdheer, ayaa sheegay in buugaag kala duwan oo da’yar wiilal iyo hablo isugu jiraa ay curiyeen in lagu soo bandhigi doono mudadda ay socoto, oo martisharaf ka kala socda dhammaan gobolada Somaliland lagu soo casuumay.